Ndeipi nhare mbozha ine Internet inokurumidza mu4G LTE? 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
MuItaly, nharembozha dzave neshanduko huru zvichienzaniswa nezvakaitika kare uye mushure mekubatana pakati pezviviri zvevane main mobile operators, Mhepo nevatatu, isu tine mukana wekupinda mumunda weanoshanda Iliad, iyo ine yakaderera mitengo iri kuita kukwikwidza kukuru nevamwe vashandisi vechinyakare (vanopfuura mamirioni matatu vashandisi mugore nehafu). Asi pakati pevashandi vese ava Ndeapi aunofanira kusarudza zvichienderana nekumhanya kweInternet yekubatana? Zviri nyore kutora zvipikirwa zvenhema zvekushambadzira uye mifananidzo inopihwa neanoshanda pachayo (kazhinji inhema) wonongedzera kune asiriye anoshanda kuguta redu kana kwenzvimbo yatinogara.
Kana tichinyatsoda kuziva Ndeipi nharembozha ine Internet inokurumidza mu4G LTE Munharaunda medu, wasvika gwara rakakodzera: pano tichakuratidza bvunzo dzese dzakazvimirira dzinoitwa nevanhu vechitatu kana nevashandisi vevashandisi vakasiyana ivo, kuti iwe ugone kuziva chaizvo kana paine zvakanaka kufukidzwa mumugwagwa watinogara (zvakakosha vane kumhanya kwakanaka) uye nekumhanya kupi kwatinogona kusvika neakasarudzwa opareta
VERENGA ZVIMWE: Nharembozha data network bvunzo app
Inonyanya kukurumidza Internet opareta paLTE
Muzvitsauko zvinotevera tinokuratidza bvunzo dzinoitwa nevechitatu kuti uone kukwirisa kwenharembozha dzeInternet munyika yese uye, kune avo vanoda kuziva kumhanya muguta kana mumugwagwa wavanogara, tichakuratidzawo maturusi kukwanisa kuita bvunzo zvakasununguka, pasina kutanga watenga iyo SIM kutanga. Panguva iyoyo Tichaona chete 4G LTE tekinoroji, ichiri yakapararira uye inokwanisa kupa yakanaka kumhanya mune angangoitika ese (isu tinowana 5G chete mumaguta makuru).
Kuzvimirira kwemuviri bvunzo
Kana isu tichida kuziva nekukasira kuti ndeupi akanakisa weItaly opareta paavhareji kumhanya pane nharembozha, tinogona kurodha pasi uye kuongorora iyo PDF inopihwa neSpeedTest, iyo inopa gore rega nhare inokurumidza kupfuura dzose muItaly.
Zvinoenderana negirafu uye iyo data yakataurwa neichi chidzidzo, inokurumidza LTE network muItari iri Tre mhepo ine huwandu hwakazara hwe43,92 (anokunda iyo Speedtest mubairo). Anenge gumi mapoinzi kumashure tinowana TIM iine 32,95 mapoinzi, Iliad ine 31,34 mapoinzi uye muswe unoshamisa Vodafone, iyo inosvika pamiyedzo ine 30,20 chete mapoinzi. Aya ma data aripo akawanda mashura anokanda pasi misoro mizhinji: Wind Tre inotungamira uye inorova TIM (iyo yagara ichionekwa senge yakanakisa muItari) uye Vodafone inodonha zvinosiririsa, zvakare ichirohwa neIliad (yekupedzisira kusvika).
Kubatanidza idzi data uye nekududzira nenzira kwayo tinofanirwa kufunga imwe rakazvimiririra muviri wekumhanyisa bvunzo, kureva OpenSignal (varidzi vechishandiso chakakurumbira). Nekuwana iro rakakura bhendi peji peji, tinogona kutarisa kumatunhu makuru eItaly, tichienzanisa kufukidzwa kwevose vanoshanda mumaguta, mumasabhabha nemumaruwa.
Nekunyatsoongorora machati, tinogona kuona kuti Fastweb neTIM zviri kuita mushe mune zvese zviitiko (kunyanya mumasabhabha), WindTre inotora yechipiri mukumhanyisa mumaguta uye inotonga mumaruwa uye Vodafone iri zvakare mune ino kesi anonyanyisa opareta (kana madhorobha eLombardy neSicily akasiyiwa). Iyo Iliad opareta isipo pane ino girafu, haina kutariswa yekuyedzwa (inogona kuiswa mune ramangwana).
Maitiro ekuyedza yako network kumhanya pachako
Hatidi kutevera yakazvimirira bvunzo mazano uye tinoda "kubata" kumhanya kweneti munzvimbo medu kana kumba? Mune ino kesi, tinokurudzira kuti iwe ushandise iyo kufukidza uye mepu yekumhanyisa yakapihwa Nperf, inowanikwa pawebhusaiti yepamutemo.
Kubva pane ino saiti zvichave zvakakwana kusarudza opareta kuti aedze uye aongorore ese network kufukidzwa (LTE uye LTE Yepamberi) uye iyo chaiyo yekumhanyisa yakataurwa nemiedzo inoitwa nevashandisi. Paunenge iwe wasarudza anoshanda, tinya Network kufukidzwa kana rake Dhawunorodha mhanyisa Kusarudza muyedzo wekuita wozoshandisa mepu iri pazasi kuti uwane guta, nzvimbo kana mugwagwa watinogara kana kwatinoda kuyedza, tichishandisawo nzvimbo yekutsvaga inowanikwa muchikamu chepamusoro kuruboshwe kwemepu. Ichi chishandiso chinogona kubatsira zvakanyanya semuenzaniso kana tichifanira kutenga imba nyowani kana rendi, kuti tikwanise kutarisa kuti ndiani anoshanda uye kana zvichidikanwa kuchinja SIM tichichengeta nhamba, sezvinoonekwawo mugwara. Maitiro ekuita nhamba kutakurika uye shandura zvinopihwa nefoni.
Neimwe nzira isu tinogona kushandisa iyo OpenSignal application, inowanikwa mahara for Android ne iPhone.
Nekuisa ichi chishandiso uye nekupa zvese zvinodiwa mvumo, isu tinokwanisa kuongorora iyo LTE kufukidza uye nharembozha internet kumhanya kune chero mugwagwa kana nzvimbo muItari; kuenderera mberi, zvese zvatinofanirwa kuita kuvhura menyu pazasi mepu, mirira kubatwa kwenzvimbo yedu wobva wadzvanya kumusoro kwemenyu Zvese 2G / 3G / 4G, kuvhura menyu uko kwaunogona kusarudza nharembozha kuti uedze uye nemhando yenetiwebu (bvunzo iyi tinokurudzira kuti usiye chete chinhu 4G).
Nemiyedzo yemasangano akazvimirira uye bvunzo dzatinogona kuita nekombuta yedu kana smartphone, tinogona kukurumidza kuwana akanakisa eInternet opareta enharaunda yedu, kuti tigone kufamba nguva dzese pamhanho yepamusoro, tisingawire mumisungo uye kushambadza izvo Vashandisi vanowanzoenda kuterevhizheni kana redhiyo. Kuzvimirira bvunzo dzinoti Wind Tre ndiyo yakanakisa nhare mbozha muItari, asi mhedzisiro iyi inofanirwa kutorwa nekuchenjerera: zvirinani kuti utarise wega kufukidzwa uye kuona kuti zvinowirirana mushe kana muhofisi.
Kana isu tiri kutsvaga kunyange inokurumidza nhare mbozha isu tichafanirwa kutarisa pa5G, iyo isati yapararira asi padanho rakakwira kupfuura 4G; kuziva zvakawanda tinogona kuverenga gwara redu Maitiro ekuona sei kuvhara kwe5G.
Kana, pane kudaro, isu tiri kutsvaga nzira yekutarisisa fiber optic kufukidza kwetambo yakagadziriswa, tinokurudzira kuti uverenge zvinyorwa zvedu. Fiber kufukidza kweTIM, Fastweb, Vodafon, WindTre uye nevamwe mi Yakanakisa Fiber Optic: tarisa kufukidza uye zvinopihwa.